Abaphandi abaninzi bacinga ukuba banombono ophikisanayo we-IRB. Ngakolunye uhlangothi, bacinga ukuba yi-bureaucracy. Sekunjalo, ngelo xesha, bajonga ukuba ngaba ngumququzeleli wokugqibela wezigqibo zokuziphatha. Oko kukuthi, abaphandi abaninzi bakholelwa ukuba ukuba i-IRB iyayivuma, kufuneka ukuba ilungile. Ukuba siyakwazi ukulinganiselwa ngokwenene kwee-IRB njengokuba zikhona-kwaye (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) zazo (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -nje thina njengabaphandi kufuneka sithwale uxanduva olongezelelweyo ngokwemigaqo yophicotho lwethu. I-IRB ingaphantsi komhlaba, kwaye le ngcamango ineziphumo ezimbini ezibalulekileyo.
Okokuqala, i-IRB ngumgangatho uthe ukuba usebenza kwiziko elifuna ukuhlaziywa kwe-IRB, kufuneka ulandele le mithetho. Oku kubonakala kubonakala, kodwa ndabona ukuba abanye abantu babonakala befuna ukuphepha i-IRB. Enyanisweni, ukuba usebenza kwimimandla engaxininiswayo, i-IRB ingaba ngumanyano onamandla. Ukuba ulandela imithetho yabo, kufuneka bajonge emva kwakho kufuneka kubekho into engafanelekanga ngophando lwakho (King and Sands 2015) . Kwaye ukuba ungayithobeli imithetho yabo, unokuphelisa ngokwakho kwimeko enzima kakhulu.
Okwesibini, i-IRB ayilona isimboli kuthetha ukuba ukugcwalisa iifom zakho kunye nokulandela imigaqo akwanele. Kwiimeko ezininzi wena njengomphandi nguye owaziyo kakhulu malunga nendlela yokuziphatha ngokuziphatha. Ekugqibeleni, nguwe uphando, kwaye uxanduva lokuziphatha luhlala kuwe; lakho igama lakho ephepheni.
Enye indlela yokuqinisekisa ukuba uyiphatha i-IRB njengomgangatho kwaye akukho simbolo kukubandakanya isithasiselo somthetho kumaphepha akho. Enyanisweni, unokuyilungisa isilathisi sakho sokuziphatha ngaphambi kokufunda kwakho kuqala, ukuze uziphoqe ukuba ucinge ngendlela oya kuchaza ngayo umsebenzi wakho oontanga kunye noluntu. Ukuba ufumanisa ukuba ungonwabi ngelixa ubhala isihlomelo sakho sokuziphatha, ngoko ke isifundo sakho asikwazi ukukhangela ibhalansi efanelekileyo yokuziphatha. Ukongezelela ekuncedeni ukuxilonga umsebenzi wakho, ukupapasha izihlomelo zakho zokuziphatha kuya kunceda uluntu uphando lubonisane nemiba yokuziphatha kwaye kusekwe imimiselo efanelekileyo esekelwe kwimimiselo evela kuphando loqobo. Itheyibhile 6.3 ibonisa amaphepha ophando olusisigxina endicinga ukuba lunxibelelwano oluhle malunga nokuziphatha kophando. Andivumelani nawo onke amabango abhaliweyo kule ngxoxo, kodwa yonke imizekelo yabaphandi abenza ingqibelelo ngendlela echazwe Carter (1996) : kwimeko nganye, (1) abaphandi banqume oko bacinga ukuba kulungile kwaye yintoni ephosakeleyo; (2) zenza ngokusekelwe kwizinto abazigqibileyo, kwindleko zabo; kwaye (3) babonisa esidlangalaleni ukuba basebenzayo ngokusekelwe kuhlalutyo lwabo lwemiqathango.
Itheyibhile 6.3: Amaphepha kunye neengxoxo ezichaphazelekayo ngeMigaqo yoPhando lwabo
Inkcazo ejongene nayo
Rijt et al. (2014) Uvavanyo lwengingqi ngaphandle kwemvume
Ukuphepha ukulimala kwimeko
Paluck and Green (2009) Uvavanyo lwemihlaba kwilizwe eliphuhlisayo
Uphando malunga nesihloko esibucayi
Ukulungiswa kwezixhobo ezinokwenzeka
Ukulinganisela ingozi kunye neenzuzo xa iingozi zinzima ukulinganisa
Chaabane et al. (2014) Iimpembelelo zentlalo yophando
Ukusebenzisa iifayile zeefayile ezihambileyo
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Uvavanyo lwengingqi ngaphandle kwemvume
Soeller et al. (2016) Imigaqo yenkonzo ephuliweyo